Akụkọ - Enweghị emechi na ezumike nke National Day, Binuo Mechanics dị njikere mgbe niile!
Nitrogen dị ọcha
Kpọgide ikuku Compressor
mmiri jụrụ oyi
Ọgwụ ọgwụ bayoloji
Ụlọ ọrụ Rubber Taya
Ụlọ ọrụ Cutting Laser
Ụlọ ọrụ nhazi nri
Enweghị mmechi na ezumike nke National Day, Binuo Mechanics dị njikere mgbe niile!
Na Ọkt 1, ụbọchị ahụ bụ ncheta afọ 72 nke ntọala PRC. Ndị ọrụ niile nke Shandong Binuo Mechanics Co., Ltd. na-achọ ka China nwee ọganihu na ọganihu.
N'oge obi ụtọ a, ndị mmadụ sitere na ụdị ndụ niile malitere ogologo ezumike ha nke ụbọchị asaa na China. Ma, Binuo Mechanics akwụsịghị ọrụ anyị, na ndị ọrụ na-ere ahịa na-echere maka awa 24 iji dozie nsogbu ndị ahịa.
Ruo n'elekere 5:00 nke abalị na Ọktọba 7, 2021, ndị otu ọrụ azụmaahịa nke Binuo Mechanics natara oku ọrụ ndụmọdụ site n'aka ndị ahịa 17 ọhụrụ na ndị ochie, na-edozi usoro ọgbọ PSA Nitrogen ugboro 8 na sistemụ mkpakọ ikuku nke ndị ahịa ochie. edozi n'ime awa 48 gafee mba ahụ.
Mechanics Binuo na-eme ka ndị ahịa na-arụ ọrụ nkịtị n'oge ezumike nke National Day. Na foto saịtị dị mkpa dị ka ndị na-eso (Ndị ahịa si Shandong, Hebei na Liaoning na China):
Ndị otu na-ere ahịa na-ere ahịa na-enye 7 * 24 ọrụ ọkachamara, oge na nke zuru ezu otu nkwụsị maka ndị ahịa.
Binuo Mechanics malitere itinye aka na ahịa na ọrụ ndozi nke ikuku compressors na akụrụngwa corollary na 2014, ugbu a, anyị etolitela n'ime otu ndị ọrụ ọrụ ọkachamara na-eje ozi n'ofe ụwa, nke na-elekwasị anya na ọgbọ PSA nitrogen / oxygen, kọmpụta ikuku na akụrụngwa akụrụngwa.
Oge nzipu: Ọktoba 08-2021
Ọgbọ ike hydrogen, Hydrogen na Oxygen Generator, Atlas Copco Ngp, Holtec Nitrogen Generator, Psa Nitrogen osisi, Psa Nitrogen,